YukikaHana177's Reading List - YukikaHana177 - Wattpad
YukikaHana177's Reading List
#selu #luhan #hunhanfanfic #yaoi
Bleeding Love Of Fallen Angel
76.9K 11.4K 108
အတ္တကြောင့်မဟုတ်ဘဲ🍃 သစ္စာကိုတန်ဖိုးထားလွန်းခြင်းကြောင့်.. ကွဲပြားမှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲ တူညီလွန်းခြင်းကြောင့်..🍃 မုန်းတီးမှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲ🍃 ချစ်မြတ်နိုးလွန်းသောကြောင့်.. ဆာကူရာပန်းတွေ ဝေသော ဂျပန်မြေပေါ်...🍃 ကြွေလွင့်ခဲ့ရသော🍃 နှလုံးသားအပိုင်းအစများ... 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 စစ်မြေပြင်ပေါ်က မျက်တောင်မခတ်တ...
244K 21.2K 56
48.5K 5.6K 15
စာ​ရေးသူ- 江心小舟 ဘာသာပြန်သူ- Zhen Ming Ming ( ကြိုပြောရဦးမယ် * bl * ပါနော်) "မိတ်ဆက်" အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိ၊ တိတ်တိတ်လေး ချစ်ခဲ့ရသူကို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်တွေ့ရတဲ့အခါ ရှယောင် ဟာ နဂိုကနဲ့ လုံးဝ မတူညီတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ မင်းက ငါ့ကို မချစ်ဘူးဆိုရင် ငါမင်းကို လက်လွှတ်ပြီး လွတ်လပ်ခွင်...
ရိုးရာဝတ္ထုတို ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ Credit to : Original Author
79.9K 7K 22
HH..yaoi.... My Neverland HunHan..
48.7K 6K 19
ပျော်ရွှင်ဖွယ်အတိပြီးသော... မြတ်နိုးဖွယ်အတိပြီးသော..... ချစ်ခြင်းတို့ဖြင့်အတိပြီးသော.... လိုအပ်ချက်ကင်းမဲ့ဇုန်...... ပေါက်စတို့ရဲ့ အိမ်
77.6K 10.1K 24
မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ နေရာတွေ ၊ အချိန်တွေ မတူခဲ့ပေမယ့် ချစ်မြတ်နိုးခြင်းတွေကတော့ တူညီစွာ အချိုးကျ တယ် ။
30.2K 3.9K 16
ချစ်​​သော ... ပို၍ချစ်​​သော ။
23.8K 3.3K 12
ဦးစွာ​​သော တွေ့ဆုံခြင်းသည်​ Xiao Robot နှင့်​ အစပြုသည်​ ။ ​ သူ​မေ့ပစ်​​သော ​လှပဆန်းကြယ်​လွန်းသည့်​ အတိတ်​တို့သည်​ Xiao Robot နှင့်​ အစပြုသည်​ ။ နှိုင်းဆမရနိုင်​​သော ချစ်​​မေတ္တာ တို့သည်​လည်း Xiao Robot နှင့်​ အစပြုသည်​ ။ #hunhan
4.8K 553 8
​​နေအရိပ်​ကို​မျှော်​ကိုးရင်း မီး မဟုတ်​ ​နေကိုတိုးမယ့်​ ပိုးဖလံငယ်​ ။
HunHan Facts ~♥~ Completed
399K 45.4K 130
လှပသော ကောင်လေးတယောက် နှင့် သူ့ကို ချစ်သော၊ သူကလည်း ချစ်သော ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်း Han & Sehun facts ☆ 훈한 이야기 ☆
My Vampire Bambi ~♥~ Completed
503K 27.6K 40
Luhan ~﻿ A cute vampire who doesn't know what is love Sehun ~﻿ A handsome lawyer who falls in love withavampire Baekhyun ~﻿ Luhan's friend ,avampire Chanyeol ~﻿ Sehun's friend ,adoctor Chen ~ Sehun's friend ,alawyer Tao ~﻿ A werewolf who wants to possess the handsome lawyer Kris ~﻿ Fallen Angel ❤ ♡ Rate...
51.5K 3.5K 13
Love & Hate Relationship [Completed]
37.8K 3.8K 21
ချစ်ခြင်းနဲ့မုန်းခြင်းကြားမှာ အလွှာပါးပါးလေးတခုပဲခြားထားတယ်... အဲဒီ့အလွှာလေးကိုဖယ်ခွာနိုင်ရင် မင်းအရမ်းမုန်းနေတဲ့သူကိုလဲ ချစ်မိသွားလိမ့်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ... Yunho x Changmim Yuchun x Jaejoong TVXQ fan-fiction
PURR (ChanLu) BoyxBoy
7.6K 611 13
Chanyeol *Just moved in to start college *Young and Carefree *Allergic to Cats Luhan *Been around town forawhile *Lazy but Clingy *source of Chanyeol's Allergy
Hunnie's Idol (Discontinued)
15.1K 1.6K 4
❤ Feelings ofafan boy when he imagines about his lovely Idol ❤ Yaoi ✔ Final Part will be Rated M ✔
Run This Rate-M
1.1M 49.9K 48
လူတွေကစက္ကူပန်းဆို အနံ့မရှိဘူးဆိုပြီးတန်ဖိုးမထားကြဘူး... ညမှပွင့်တဲ့ညမွှေးပန်းပင်လေးကိုလည်းမွှေးပျံ့ တဲ့ရနံ့တွေပေးနေတာတောင် တန်ဖိုးမထားကြဘူး... Hakတကယ်တော့ဒီလိုတန်ဖိုးမထားတဲ့သူတို့ကကောဘယ်လောက်များတန်ဖိုးမြင့်နေကြလို့လဲ? HunHan Yaoi Rate-M
77.5K 1.1K 16
QUICKLY WEAR THE FACE OF THE DEVIL Associated Names 快穿之打脸狂魔 Author(s) Fengliu Shudai 風流書呆 This Story is not mine, Just for offline purpose This isaBL story Description The top hacker was chosen by the Lord God to be reborn as hundreds of thousands of villains, Every world ended inadead end, Every end is tragic. Fi...
ဗီလိန်​မာယာ 【Face Of Devil】
661K 70K 74
Quickly wear the face of the devil Author: ©®Fengliu Shudai Original translation: ©® keztranslations ကျိူးယွင်​ရှန့်​ဆိုတာသိပ္ပံ​ခေတ်​ကhackerတစ်​​ယောက်​။သူက ဘဝရာ​ထောင်​ချီဗီလိန်​အဖြစ်​ပြန်​လည်​​မွေးဖွားဖို့ Lord Godရဲ့​ရွေးချယ်​ချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်​။ မတူညီတဲ့ဘဝရာ​ထောင်​ချီ။ အဓိပ္ပာယ်​မရှိတဲ့ ညွှန်​ကြားချက်​အတိုင်းလုပ်​ရ...
19.8K 2K 6
By @luhanniesandy ကျနော်လား? Single မဟုတ်ဘူးလေ... Luhannie ရဲ့ Sehunnie ^^ Sehunnie ကကျနော့်ချစ်သူ... လာမထိနဲ့ မီးပွင့်သွားမယ် Type >> Yaoi, Sweet, Romance, Comedy
I NEED YOU ( ကို့ဘဝမှာမင်းကိုလိုအပ်တယ် ) Myanmar Version
46.3K 3.2K 25
Kris: ကိုယ်တောင်းပန်ပါတယ်။ Luhan : ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ မသွားပါနဲ့။ ငါ့ဘဝထဲမှာမင်းရှိမှဖြစ်မှာမို့လို့ပါ။ I also posted in asianfanfics under the same name.. if you want to read it in English.... you can go to the link down here... mwahhhhhh http://www.asianfanfics.com/story/view/716361/i-need-you-angst-love-luhan-kris...
Devil:But,I Love Him (18+)
203K 10.4K 21
Servents Of Heart♡ [Completed]
41.4K 2.3K 23
My First Creation..♡ ★ Hunhan ★ Chanbaek ★ Dika (Normal)
My Angry Bambi
24.8K 1.9K 5
ဘယ်​သူကဘယ်​သူ့ကို crushဖြစ်​​နေတာလဲဆို​တော့.......... HunHan/SeLu (Two shots)
11.8K 1.2K 2
ကိုယ့်အတွက် တကယ်လိုအပ်တယ် အကျိုးရှိတယ် စစ်မှန်တယ် ဖြူစင်တယ် ကိုယ့်စိတ်ထဲနှလုံးသားထဲက ဖြစ်ချင်တဲ့ တကယ့်ဆန္ဒ အမှန်တွေပြည့်ဖို့ Dandelion ပွင့်လေးကကူညီပါလိမ့်မယ်။
My Personal Artist (18+)
48.8K 947 2
Work by @twisklingliky Original wp acc မှာ​ရေးခဲ့တဲ့ fic တစ်​ပုဒ်​ဖြစ်​တဲ့ ''My Personal Artist'' ဆိုတဲ့ Romance ဆန်​ဆန်​fic ​လေးကို 100+ ​​ဖျော်​ရည်​တိုက်​လိုက်​တဲ့အခါမှာ​တော့..... Enjoy reading!!! ~ ♥♥♥
HunHan♥Yaoi♥ Comedy,Romance,Yaoi,angst Happy Birthday SeHun And LuHan(HunHan) April Boy.... HunHan.... Our HunHan... hope you enjoy!~~~^_^~~~ Warning...Rated•M